Archives: Our Heroes in the Mainstream | Nepaldalitinfo International
राम्रो आर्थिक फड्को मारेर उदाहरण बनेकी मधेसी दलित महिला कौशिल्या खटिकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार पाउने भएकी छन् ।
– जनक नेपाल
बेतहनी -बाँके, आश्विन ९ – छोटो समयमै राम्रो आर्थिक फड्को मारेर उदाहरण बनेकी मधेसी दलित महिला कौशिल्या खटिकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार पाउने भएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हेफर इन्टरनेसनलले उनलाई ‘गोल्डेन ट्यालेन्ट अवार्ड’ का लागि छनोट गरेको हो । चितवनदेखि पश्चिमका कसैले यसअघि यो पुरस्कार पाएका थिएनन् । एक हजार डलरको यो पुरस्कार कौशिल्यालाई आइतबार भव्य कार्यक्रमबीच नेपालगन्जमा प्रदान गरिने हेफरका संयोजक दुर्गा केसीले बताए । ३५ वषर्ीया कौशिल्याले पुरस्कार पाएको थाहा पाएपछि बधाई दिन वरपर गाउँका महिला उनको घरमा झुम्मिएका छन् । सिंगो दलित बस्ती नै रमाएको छ ।
बेतहनी-९ स्थित अमितपूर्वाकी उनले जनचेतना महिला बचत समूहमार्फत आर्थिक फड्को मारेर पुरस्कार पाएकी हुन् । तीन वर्षअघिसम्म उनका पति रामसाय रिक्सा चलाउँथे । उनी खेती मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्थिन् । भएको ६ कठ्ठा जग्गा पनि डुडुवा नालाले काटेपछि उनको परिवार सुकुम्बासीझैं भएको थियो । रामसाय बिहान ३ बजे उठेर १५ किलोमिटर परको नेपालगन्जमा रिक्सा चलाउन जान्थे । साँझमा घर फर्किंदा कौशिल्या चामल पर्खेर बसेकी हुन्थिन् । ‘कमाइ नभएको दिन भोकै सुत्नुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भने खान, लगाउन कुनै समस्या छैन । घरखर्च सजिलै चलेको छ ।
बचत समूहमा संगठित भएपछि उनको दम्पतीले तरकारी खेती सुरु गर्यो । ‘पछि बाख्रा र सुँगुर पाल्न थालेपछि जीविकोपार्जन केही सहज हुँदै गयो,’ उनले सम्भिmइन् । सामूहिक तरकारी खेती गरेर उत्पादन नेपालगन्ज लैजान थालेपछि कौशिल्याको आम्दानी बढेको हो । आम्दानी बढेपछि उनले २६ हजार ऋण तिरिन् र दुई कठ्ठा जग्गा किनेकी छन् । घरमा राँगा, बाख्रा र सुँगुर पालेकी छन् । गाउँमा सानो किराना पसल खोलेकी छन् । छोरालाई निजी विद्यालय भर्ना गरेकी छन् । दुई छोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । ‘छोटो समयमा यति धेरै प्रगति भयो भन्दा धेरैले झट्ट पत्याउँदैनन्,’ उनले सुनाइन् । समूहले पनि कौशिल्याले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएकामा बैठक बसेरै बधाई दिएको छ ।
कौशिल्या मात्र हैन, समूहमार्फत गाउँका ४५ परिवारको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । सुरुमा १० जनाबाट समूह सुरु भएको थियो । अधिकांश भूमिहीन उनीहरूले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरेका हुन् । एक मौसममा ८० हजारभन्दा बढीको तरकारी बेचेपछि उनीहरू सामूहिक खेतीप्रति उत्साहित छन् ।
‘गाउँमा कसैले पनि जाँडरक्सी खाँदैनन्, जुवातास खेल्दैनन् । पतिपत्नी मिलेर काम गर्छन्,’ समूहकी अध्यक्ष रेखा खटिकले भनिन्, ‘जाँडरक्सी र जुवातासले दिनहुँ झगडा हुन्थ्यो । स्वास्नीमान्छेले दिनदिनै कुटाइ खानुपथ्र्यो । अचेल गाउँमा शान्ति छ । सबै हाँसीखुसी छन् ।’ बहुमुखी सेवा केन्द्रले समूह गठन गर्न र महिला-पुरुष मिलेर जीविकोपार्जनका उपाय निकाल्न तालिम दिएको थियो । सुरुमा बैठक र तालिममा जाने महिलालाई पुरुषले गाली गर्थे । तर अचेल महिला बैठकमा गए पुरुषले खाना पकाएर बस्ने गरेको अध्यक्ष खटिकले बताइन् । ‘खेतको काम गर्दा होस् वा भान्साको, लोग्नेले स्वास्नीलाई सघाउन थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले घर-घरमा खुसी छ ।’
प्रकाशित मिति: २०६७ आश्विन १० ०८:११
Heroes of Our Communities: सामाजिक सेवामा अगुवा नेत्री बिष्णु माया परियारलाई सम्मान
बोस्टन- दि लायन्स क्लब अफ हिमालयनद्वारा बोस्टन शहरको समरभिलमा आयोजना गरिएको तीज उत्सब कार्यक्रममा दुई नेपाली अमेरिकि महिला हस्तिहरु साहित्यकार भारती गौतम र सामाजिक सेवामा अगुवा नेत्री बिष्णु माया परियारलाई सम्मान गरिएको छ।
>>> More on this story.
Heroes of Our Communities: बहुमुखि प्रतिभाकि धनि उर्मिला
– मधु शाही समुन्द्री
काठमाडौ १९ भदौ । हरेक मानिसमा एउटा न एउटा प्रतिभा लुगेको हुन्छ । तपाईहरुमा पनि कुनै न कुनै प्रतिभा लुकेको होला, सायद पत्तालगाउन सक्नुभएको छैन । तर एउटै मान्छेमा एकभन्दा बढि प्रतिभा भयो भने त्यसलाई हामी बहुमुखि प्रतिभाको धनि भनेर उपनाम दिने गर्दछौ । हो तिनै बहुमुखि प्रतिभा बीच की एक अर्कि कोपिला हुन उर्मिला विश्वकर्मा । उर्मिला विश्वर्कमा रु पक्कै पनि तपाईहरुको मनमा यस्तै प्रश्न उठेको होला । उनको पुरै परिचय जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकपटक नेपाल टेलिभिजनबाछ प्रसारण हुने दलन टेलिश्रृंखला सम्झनुपर्छ । सानी चुल्बुले स्वभावकि नैना पात्रको रुपमा उनको वास्तविक प्रतिभा झल्किन्छ । उनी दलनमा दलित भित्रको विभेदलाई हटाउने प्रयासमा अभिनय गरेकि छन् । मानव दमाई संगको बाल्यकालको प्रेम जात नमिलेकै कारण सफल हुन नसकेपछि नैना आत्महत्या गर्छिन । चाहे त्यो अभिनय होस चाहे नाचगान उर्मिला जस्तो सुकै भुमिकामा काम गर्न सक्षम भएको बताउछिन् । यसोत हेटौडा चुरियामाई ३ मा जन्मिएकि उर्मिला आफुलाई प्रख्यात अभिनेत्रि भन्दा पनि असल गायिका बन्न रुचाउने बताउछिन् । नाच्नहोस् या गाउन उर्मिला दुवै कुरामा उत्तिकै क्षमता भएकि छन् । तिमीले नसम्झीदा माया बेग्लै हुदो रहिछ, यात्रा भिडमै भएपनि एक्लो हुदो रहिछ……गायिका मल्लिका कार्किको यो गीतलाई उनले अस्ट्रेलियाको ३ केडि एफएममा गाएर सुनाइन् । गीत उनको नभएपनि स्वरको जादुले अस्ट्रेलियाको उक्त एफएमले उर्मिलाई अन्तरवार्ता लिएको थियो । भविश्यमा उर्मिला चर्चित गायिका बन्न चाहन्छिन् । त्यसकोलागि अहिले देखि नै संगीत सिक्दैछन् । यसोत उर्मिला एक दलित समुदायकि युवति हुन् । कलाकारितामा रुचि देखिएपनि उर्मिला समाजमा विद्यमान जातिय विभेद र महिला हिंसा विरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यमा सक्रिय छिन् । जागरण मिडीया सेन्टरमा विगत ९ वर्ष देखि कार्यरत उर्मिला भविश्यमा असल गायिका बन्ने चाहाना राख्छिन् । गायिकाको रहर बोकेकि उर्मिलाले आधुनि गीत एल्बम निकाल्ने तर्खरमा छिन् । ‘गीत रेकर्ड भै सकेको छ, उनले भनिन् ‘अब बजारमा आउने तयारि हुदै छ’ । यसोत उनलाई ठुलो पर्दामा हिरोनीको अफर नआएको पनि होइन् तर अहिलेको सस्तो फिल्म क्षेत्र प्रति आफ्नो खासै रुचि नभएको उनले बताइन् । उर्मिला माया पिरतिको फिल्म होइन् समाजमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने फिल्म खेल्न अत्यन्त आतुर रहेको बताउछिन् । जुन फिल्मले समाजमा परिवर्तन ल्याउछ म त्यो फिल्म सित्तैमा नै खेलिदिन्छु उनले भनिन्। एउटी युवति अधिकारकर्मी, नायिका गायिका, लेखिका सबै क्षेत्रमा हात हाल्नुको कारण के होला त ?मैले गरेको यस्तो जिज्ञासामा उर्मिलाको धारणा जस्तो थियो । दलित समुदायमा बाल्यकाल देखि समाजमा भोगेको विभेदकारी क्रियाकलापले उर्मिलालाई जातिय विभेद विरुद्ध लड्न इच्छा जागेको हो भने संगीत र कलाकारीता उनको आफ्नो आन्तरि शोक हो । ‘जातिय विभेद विरुद्ध काम गर्नु मेरो सामाजिक उत्तर दायित्व हो’ उर्मिलाले भनिन् ‘कलाकारीता शोक हो’ । समाजमा कलाकारिता र अधिकारलाई एकैसाथ लिएर हिडेकि उर्मिलाले भविश्यमा कत्तिको सफलता पाउने हुन त्यो त हेर्न बाकि नै छ । आशा गरौं उनको कलाकारीताले उचित सफलता पाओस् ।
Source: NM Khabar
Heroes of Our Communities: Bishwakarma scripts Nepal’s win
Article from: The Kathmandu Post Article date: February 27, 2010
KATHMANDU, Feb. 27 — Rahul Kumar Bishwakarma, who had madeacome back after three years, took seven wickets as he spun Nepal toafive wicket win against US in the finals of the Pepsi ICC World Cricket League Division5on Saturday in front of around 20 thousand home crowd.
Bishwakarma, who had madeacome back in the tournament after his bowling was suspected in the U-19 World Cup in 2007, started his second spell in 40th over. US had lost only three wickets and had 150 runs on the board. Bishwakarma got rid of the danger man Massiah in his very second ball reducing US to 152 -4.
Bishwakarma then saw off new batsman A Thyagarajan in the same over. He took two more wickets …
Heroes of Our Communities: Nepal woman gets award in Canada
KATHMANDU, Dec 18: Krishna Rasali,aNepali national, is one of the recipients of Premier”s Award for Excellence in the Public Service for the year 2008-09 in Saskatchewan Province of Canada.
Brad Wall, premier of the province, gave her the award at an elaborate function on Monday. Rasali hails from Syangja and has been residing in Canada for the last 15 years.
Premier’s Award for Excellence in the Public Service (2003-2009)
Heroes of Our Communities: रसाइली एसियाडका लागि छानिए
काठमाडौ, भाद्र १८ – दसौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा उसुका स्वर्णपदक विजेता राजकुमार रसाइली १६ औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) का लागि बिहीबार छनोट भएका छन् ।
नेपाल उसु संघले गरेको अन्तिम चरणको छनोट पार गर्ने क्रममा उनले सान्सौ पुरुष ५६ केजी तौल समूहमा युवराज गुरुङलाई पाखा लगाए । ‘११ औं सागमा भाग्यले ठग्यो । आयोजक बंगलादेशले मेरो तौल समूह समावेश गरेन,’
रसाइलीले भने, ‘मसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कमी छैन । एसियाडमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने छु ।’ श्रीलंकामा भएको १० औं दक्षिण एसियाली खेलमा ५२ केजी तौल समूहका स्वर्णधारीले आफ्नो तौल समूह हटाएका कारण बंगलादेशमा भएको ११ औं सागमा सामेल हुन पाएनन् । उनले दोहामा भएको १५ औं एसियाडमा सहभागिता जनाएका थिए । तर उनलाई भारतीय खेलाडीले पाखा लगाएका थिए ।
यसपटक तौल समूह बढाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राजकुमारले साफ च्याम्पियनसिपका स्वर्ण विजेता युवराजलाई पाखा लगाए । पहिलो चरण आफ्नो पक्षमा पारेका राजकुमारले दोस्रो चरण भने गुमाएका थिए । त्यसपछि तेस्रो चरणमा पुनः राजकुमार सफल भए । तेस्रो चरणमा दुवै खेलाडीले समान अंक पाएका थिए । तर राजकुमार शारीरिक तौलका आधारमा विजयी घोषित भए ।
यस्तै पुरुष सान्सौमा भूषण वज्राचार्य, सागका रजतपदक विजेता पुरुषोत्तम रिजाल र मंगलप्रसाद थारू पनि एसियाडका लागि छनोट भए । ७५ केजी तौल समूहमा भूषण वज्राचार्यले तेजबहादुर पण्डितलाई हराए । शम्भु तामाङले वाकओभर दिएपछि ६५ केजीमा एघारांै सागका रजतपदक विजेता पुरुषोत्तम स्वतः छनोट भए । यस्तै शंकर सुवेदीले अन्तिम चरणको छनोटमा भाग नलिएपछि ६० केजीमा पनि मंगलप्रसाद थारूले एसियाडमा मौका पाए । शंकर हाल भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । एघारौं सागमा शंकरले भारतबाट खेल्दै रजतपदक हात पारेका थिए । छुट्टी मनाउन घर आएका शंकरले यसपटक नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने भन्दै दोस्रो चरणसम्म छनोट भएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नेपालबाट खेल्न उनलाई भारतीय सेनाले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । मुख्य प्रशिक्षक प्रणिलध्वज कार्कीका अनुसार सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतीय सेनाले अनुमति नदिएपछि उनी एसियाडको अन्तिम छनोटमा भाग लिनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
सान्सौमा महिलातर्फ एलिना चौधरी र झरना गुरुङ छनोट भएका छन् । ५२ केजीमा एलिनाले उर्मिला श्रेष्ठलाई हराइन् । यस्तै ६० केजीमा झरनाले चाहना लामालाई पन्छाइन् । एलिना र झरना एघारौं सागका कांस्यपदक हात पार्ने खेलाडी हुन् ।
एघारौं सागमा मुलुकलाई पहिलो स्वर्णपदक दिलाउन सफल उसुकी विनीता महर्जन र अर्का स्वर्ण विजेता आङबाबु लामा पनि गोन्जाउ एसियाडका लागि छनोट भए । महिला थाउलोको थाइची छ्वान अलराउन्डमा पहिलो हुँदै विनीताले गोन्जाउको यात्रा तय गरिन् । विनीताले १६ दशमलव ५ अंक हासिल गरेकी थिइन् । उनकी प्रतिद्वन्द्वी इरिका लामा १० दशमलव ९० अंकमा रोकिइन् । यस्तै, पुरुष थाइची छ्वान अलराउन्डमा आङबाबु लामा सफल भए ।
आङबाबुले १७ दशमलव १५ अंक हात पारे । उनका प्रतिद्वन्द्वी विकास श्रेष्ठ १५ दशमलव ६५ मा रोकिएका थिए ।
पुरुष छानछ्वान ताउसु कुन्सुमा मिराजन आलेमगरले एसियाड यात्रा तय गरे । मिराजन १५ दशमलव ३० अंक हात पार्दै पहिलो भए । उक्त स्पर्धामा विकास राई १४ दशमलव ८० अंकमा रोकिए । पुरुष नानछ्वानमा राजु मर्हजन सफल भए । राजुले सनी श्रेष्ठलाई पछि पारेका थिए । महिला छानछ्वान अलराउण्डमा समी लामा सफल भइन् । समीले मानिका गुरुङलाई हराएकी थिइन् । महिला नानछ्वान नानतावमा विद्या महर्जन छनोट भइन् भने पुरुष छानछ्वाङमा विकास राईले गोन्जाउको यात्र तय गरे ।
दिदी र भाइले एसियाड खेल्ने काठमाडौं- चीनको गोन्जाउमा हुने १६ औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) का लागि पौडीतर्फ दिदी शैला राणा र भाइ शैलेश राणा बिहीबार छनोट भएका छन् ।
सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीमा भएको अन्तिम छनोट प्रतिस्पर्धाको महिला एक सय मिटर फ्रि-स्टायलमा शैलाले ओसिन भारतीलाई पछि पारिन् । शैलाले उक्त दूरी १ मिनेट १२ः०७ सेकेन्डमा पूरा गरिन् । ओसिनले १ मिनेट १४ः४५ सेकेन्ड उक्त दूरी पूरा गरिन् ।
त्यस्तै पुरुषको एक सय मिटर फ्रि-स्टायलको दूरी १ मिनेट ००:४९ सेकेन्डमा पूरा गर्दै शैलेशले ओलम्पियन प्रसिद्धजंग शाहलाई पछि पारे । प्रसिद्धले निर्धारित दूरी १ मिनेट ०४ः२७ सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०६७ भाद्र १८ ०९:४५